စေတနာသည် လူတိုင်းနှင့် ထိုက်တန်သည်
Website များSoftware များGame များ
CD/DVD အတွက် Data ကူးကူး၊ Video ကူးကူး Nero Burning က လွယ်ကူပြီး အထောက်အပံ့ ကောင်းကောင်း ပေးတာ အားလုံးအသိပါ။ အသုံးပြုချင်သူများ အရင်ဆုံး Download ယူပြီး ကွန်ပျူတာထဲမှာ Anti Virus အတွက် ဆော့ဝဲလ်တွေရှိရင် ပိတ်ထားပါ။ ဆော့ဝဲလ်ကို အင်စတောလုပ်ပြီးရင် ချက်ချင်းမဖွင့်ပါနဲ့။ Patch ဖိုင်လေးကို Copy ကူးပြီး C:\_Program Files (x86)\_Nero\_Nero 2020\_Nero Burning ROM ထဲ Past ချပါ။ တချို့ကွန်ပျူတာတွေက Program Files ပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Past လုပ်ပြီးလျှင် ဖိုင်ကို Right Click လုပ်ပြီး Run as Administrator နဲ့ ဖွင့်ပါ။
0 ယောက် မှတ်ချက်ပြုသည်
ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူတွေ အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ မရှိမဖြစ် သုံးရတဲ့ Ant Download Manager ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Internet Download Manager လိုပဲ သုံးလို့ကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ သုံးချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Download ယူပါ။ ပြီးလျှင် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
၁။ အရင်ဆုံး Internet နဲ့ Antivirus တွေ ပိတ်ထားပါ။
၂။ Setup ဖိုင်ကို ဖွင့်ပါ။ "English", then click "OK" လုပ်။ "Next" , ပြီးရင် "I accept the agreement", ပြီးရင် "Next" အင်စတော ပြီးတဲ့အထိ စောင့်ပါ။
၃။ အင်စတောလုပ်တာ ပြီးပြီးချင်း မဖွင့်ပါနဲ့။ Crack Folder ထဲက ဖိုင်ကို Copy ယူပြီး "Ant Download Manager" Folder ကို ရှာပါ။ (ဥပမာ - C: \_ Program Files (x86) \_ Ant Download Manager)
၄။ တွေ့ရင် Past လုပ်ပါ။ Replace / Ovewrite. ပေါ်လာရင် အိုကေလုပ်ပါ။
၅။ ပြီးရင် Internet ပြန်ဖွင့်ပြီး Ant Download Manager ကို ဖွင့် သုံးနိုင်ပါပြီ။
Desktop Computer နဲ့ Laptop Computer တွေမှာ Facebook Messenger ကို သုံးလို့ရပါပြီ။ ဖုန်းမှာ သုံးသလိုပဲ Call နဲ့ V Call တွေလဲ သုံးလို့ရပါတယ်။
ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူပြီး သုံးနိုင်ပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်း ကမ္ဘာမကြေ တီးလုံးသံစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော် အလံနောက်ခံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ လိုအပ်သူများ သုံးစွဲနိုင်ရန် ပြုလုပ်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ Download လုပ်ယူပါ။
3 ယောက် မှတ်ချက်ပြုသည်
ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ နာမည်ကြီး Channel အားလုံးကို စုစည်းပေးထားတဲ့ Website တစ်ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . . . သိပြီးသူများအတွက် မဟုတ်ပါ . . .
1 ယောက် မှတ်ချက်ပြုသည်
My blog was born on October 23, in the year of 2007. Everybody knows me Blogger "Mg Say Ta Nar". Actually, I'm notaBlogger. I do not have any "Computer Certificate". I live in Myanmar . For the time being, I earnaliving with few salary.
သင်၏ အီးမေးလ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
ဘလော့မှာ ဦး ရှိနေသည်။
မောင်စေတနာ. Powered by Blogger.